Hadal jeedinta Madaxweyne Farmaajo: Nuxurka! - Ahmed Abdihadi
Hadal jeedinta Madaxweyne Farmaajo: Nuxurka!
Wuxuu jeediyay khudbaddii musharaxnimadiisa labaad!
Farmaajo waa Farmaajo: Farmaajo wali wuxuu ku taaganayahay tubtii uu siyaasadda ku soo galay, wuxuu dagaal cad kula jiraa siyaasiinta, wuxuuna saaxiib la yahay oo uu iska gadaa shacabka, gaar ahaan caamada(Populist).
Farmaajo wuxuu leeyahay caqliyad kaligii talis. U fiirso qaab hadalkiisa iyo sida uu erayada u doorto “ waxaan farayaa!” qofka firinbiga haysta waa bixi karaa! “ Raysulwsaarahayga!”
Farmaajo barlamaanka waa ka adkaaday. Wuxuu ka qaaday awooddii ay kula xisaabtimi lahaayeen ilaa markii danbe ay firinbi soo qaateen.
Wuxuu dhaliyay gool siyaasadeed markii uu caddeeyay in gobolka Banaadir matalaad loo helo. Arrintan siyaasiin badan ayaa u isticmaalayay in ay Farmaajo kula dagaalamaan laakiin albaabkaa waa uu iska soo xiray.
Arrinta Soomaliland marka laga tago in a tahay hadal siyaasadeed oo musharax wax qiima ah ma leh maxaa yeelay intuu waqti haystay waxba kama qabanin haddana waxa kali ah ee dhimman waa doorasho!
Arrin mudan In Farmaajo lagu taageero!
Arrintan ayaa aha in aysan Somaaliya anaa laandheera ah (qabiil) ku dhismaynin. Waxaa laga yabaa in ay tabtu ama farsamadu ka xuntahay laakiin in asaga oo madaxweynihii dalka ah dareemo dhibta uu qabiilku ku hayo dhismaha dowlad soomaliyeed waa arrin u baahan in lagu taageero.
Aniga oo ah Axmed Abdihadi Abdullahi waxaan jiraa dadka madaxweynaha ku taageersanahay arrintaas. Soomaaliya qabiil iyo anaa laandheera ah kuma dhismayso laakiin aragti siyaasadeed iyo feker dowlo oo hibo, halabuur, iyo haldoornimo ku sal leh ayay ku dhismaysaa!
Maxay yihiin Caqabadaha Puntland haysta: Khilaafka Deni iyo Karaash!